Music Transfer ka Computer si ay iPad leh oo aan Lugood
"Sidee baan music ka PC wareejin karaan in aan mini iPad? Waxaan ahay newbie ah halkan. Fadlan caawiyo." Asal ahaan, waxaa jira laba jawaabo su'aashan: music ka computer wareejiyo iPad aan iyo Lugood. Halkan soo socda, oo labadoodaba waxaa ka waxaa looga hadli doonaa:
Qaybta 1. Download Music ka Computer si ay iPad aan Lugood
Qaybta 2. Transfer Music ka Computer si ay iPad la Lugood
A Mac ama PC la Lugood rakibay
Your iPad iyo cable USB ay
Wondershare TunesGo - Download Songs ka Computer si ay iPad
Bedelka wax song ka your computer si iPad gudahood labaad;
Beddelaan iPad songs leheyn in iPad qaabab saaxiibtinimo;
Copy oo dhan ama songs soo xulay aad iPad in computer kasta;
Taageerada iPad hawada, iPad mini, iPad cusub, iyo in ka badan daydo iPad socda macruufka 8 / 7/6/5.
Tallaabada 1. Disable iPad Automatic syncing in Lugood
Burcad aad Lugood Library on your computer. Guji ka Edit menu oo aad rabtid dooro. In ka dhisay dabamariyay ilaa aad rabtid Qalabka uu furmo suuqa, guji Devices . Hubi ikhtiyaarka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah . Talaabadan waa mid aad u muhiim ah. Marka aan sidaa yeelno, Lugood ma beddeli doonaa content on your iPad la content laftiisa ka.
Tallaabada 2. Run Wondershare TunesGo on your computer
Haddii aadan ku rakiban Wondershare TunesGo on your computer, fadlan riix badhanka hoose si aad u soo dejisan. Markaas isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad la your computer. Run Wondershare TunesGo oo aad arki doonaa adiga iPad muuqan in uu furmo ugu weyn.
Tallaabada 3. Download Songs ka Computer si ay iPad
Riix Music Transfer, gali bogga Music Transfer ka dib markii qalabka ku xiran. Markaas riix Import inuu caddeeyo laba doorasho: Import ka Lugood / Import ka PC / Mac , ay doortaan in ay dajiyaan ka PC / Mac. Ka dib marka aad waxaa lagu muujiyey oo dhan files music wareejin in Explorer Window File, calaamadee kuwa aad rabto in lagu wareejiyo iyo riix OK. Waxaa ay u socoto.
Ogeysiiska. Beddelaan qaab music aoutomaticlly
qalabka Lugood iyo Apple (iPhone / iPad / iPad mini / iPod iwm) ma taageeri qaabab oo dhan music, qaabab in taageero Lugood yihiin; MP3, AAC, M4A, regelingen, M4R, M4B, AIFF iyo AIF, kuwaas oo aad si toos ah iyaga nuqul karaa in Lugood.
Wixii qaabab ka mid ah in Lugood ma taageeri ma, Wondershare TunesGo badalo doonaa qaab music inay mp3 aoutomaticlly.
Faa'iidooyinka laga darista Music ka Computer si ay iPad aan Lugood
Download music kombiyuutar kasta si iPad kasta;
No arrinta xogta tirtiro dhici doona in aad iPad;
La wadaag music dhexeeya computer iyo iPad ikhtiyaar ah,
Mid aad u fudud in aad nuqulka music kombiyuutar si ay iPad;
A PC ama Mac
Your cable USB iPad
Haddii aadan ku rakiban Lugood weli on your computer, ku faraxsan download Lugood oo ku xidh on your computer. Waxaa Launch. On uu furmo suuqa ugu weyn ee Lugood, riix View menu dooro Show galeeysid .
Guji ku File menu on Lugood Window dooro dar File inay Library ama dar Folder inay Library . Markaas dhirtuba your computer u heesaha. Dooro songs doonayay oo iyaga dajiyaan in aad Lugood Library.
Connect aad iPad la computer via USB ah cable iPad aad. Ka dibna waxaad arki doonaa adiga iPad muuqdaan galeeysid bidix, midig hoos AALADAHA .
Riix si aad hore iPad. Markaas waa in aad riix Music tab ee suuqa kala saxda ah. Hubi nidaameed Music dooro maktabadda Dhan music ama playlists soo xulay, fannaaniin, albums, iyo qaybaha . Ka dibna riix Codso hoose ee Window ah.
Isticmaalka Lugood inay ka computer wareejiyo music in iPad waa mid aad u fudud. Waa aalad rasmiga ah iyo inta badan loo isticmaalo si weyn ay u soo bixi music kombiyuutar si ay iPad. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta la isticmaalayo, waa in aad dhali xeerarka ku hay: 1. on your computer oo aad Lugood waxaa waa in lagu lamaaneeyo ama aad iPad. Haddii kale, Lugood masixi doonaa xogta iPad marka ku daray music ka your computer si aad iPad. Waxay ka dhigan tahay: ma beddelaan kombiyuutarada, ma hagaagsan aad iPad la kombiyuutarada dadka kale, ha dhaqso ah songs si toos ah internet-ka via aad iPad, iwm Ama waxaad ku xanuunsado doonaa ka soo gaartay xogta.
> Resource > iPad > Music Transfer ka Computer si ay iPad / iPad mini leh oo aan Lugood